Wareysiga withmer Özak ee Jaamacadda Southern Methodist (SMU) - AfricArXiv
Taariikhda shabakadda: ORCID iD // LinkedIn // Cilmi baaris // Aqoonyahan Google // OSF // Fikradaha / Kucelcelinta
Ma taqaannaa doorka kala duwanaanta, dhaqan u ekaanta iyo taariikhda horumarka dhaqaalaha iyo isku dhaca duruufaha Afrika? Wareysigan ayuu Dr. Ömer ku indha indheeyay mawduucan muhiimka ah wuxuuna sharxayaa shaqadooda doorka xuduudaha iyo isku dhaca oo ah mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn Afrika.
Associate Professor ee Waaxda Dhaqaalaha at Jaamacadda Koonfurta Methodist (SMU), a Cilmi-baarista at IZA, a Saaxiib at the Ururka Shaqaalaha Adduunka, iyo Tifatiraha kuxiran goobta Joornaalka Dhaqaalaha Dadweynaha. Wuxuu haystaa shahaadada Ph.D. dhaqaalaha ee Jaamacadda Brown, MS ee xisaabta iyo BS ee dhaqaalaha ee Universidad Nacional de Colombia, iyo BA ee Suuqgeynta iyo Xayeysiinta ee ka socota Politécnico Grancolombiano.
Baadhitaankaygu wuxuu sahamiyaa asalka taariikhiga ah ee qotoda dheer iyo cawaaqibyada muddada-dheer qaatay ee qaar ka mid ah astaamaha aasaasiga ah ee aasaasiga ah, aadanaha iyo dhaqaalaha ee salka ku haya horumarka dhaqaale ee isbarbardhigga casriga ah ee guud ahaan dalalka, gobollada iyo kooxaha qowmiyadeed. Gaar ahaan, waxaan darsaa sida isdhexgalka cilmiga noolaha, dhaqanka, hay'adaha, iyo farsamada ay u go'aamiyeen isbedelka bulshooyinka inta lagu gudajiro taariikhda aadanaha. Ajendahan cilmi-baarista ee isku-dhafan ayaa ku yaal isgoyska horumarka isbarbardhiga, kobaca dhaqaalaha, dhaqaalaha siyaasadeed, dhaqaalaha dhaqanka, iyo dhaqaalaha is-beddelka, waxayna sii kordhinaysaa aagagga isbeddelka dhaqanka iyo aadanaha, iyo anthropology dhaqameed.
Sideed ku soo baratay AfrikaArXiv?
Ka raadinta meelaha suurtagalka ah ee OSF ee kuwa ugu habboon kuwa akhristayaasha suurtogalka ah ee cilmi-baaristayada.
Miyaad hore ula wadaagtay natiijooyinka natiijooyinka kale ee waraaqaha daabacan ama xisaabaadka hay'ad?
Waxaan kula wadaagay natiijooyinkeyga taxanaha warqadaha shaqada ee NBER, IZA, GLO, waaxda dhaqaalaha ee Brown iyo SMU, iyo sidoo kale keydadyo sida SSRN, Ideas / REPEC, OSF, SocArxviv, iyo AfricArxiv
Asalka Qeybta Shaqada Waqtiyada Warshadaha Kahor
Dabeecadaha Luuqadeed iyo Dhismaha Raasamaalka Aadanaha
Fogaanshaha Soohdimaha Tiknoolojiyadda Hore iyo Horumarinta Dhaqaalaha
Dhaqanka, Baahinta, iyo Horumarinta Dhaqaalaha: Dhibaatada u dhiganta kormeerka shaqada
Asalka Beeraha ee Mudnaanta Waqtiga
Isticmaalka ugufiican ee hubin la'aanta, caqabadaha xisaabtanka, iyo caqliga xaddidan
Dhaqanka Isticmaalka La Qabsiga
Go’doon iyo Horumar
Qaababka iswaafajinta ee laba geesoodka ah
Xuduudaha Xuduudaha: (De facto) Soohdimaha Qoomiyadaha Taariikhiga ah iyo Colaadda Casriga ah ee Afrika
Xididdada juqraafiyeed ee Coevolution ee Dabeecadaha Dhaqanka iyo Afka
Asalka juquraafi ahaan iyo cawaaqib xumada dhaqaale ee qaab dhismeedka luqadda
Asalka iyo Cawaaqibta Mudada Dheer ee Qaybta Shaqada
Waxsoosaarka Dhulka iyo Horumarinta Dhaqaalaha: Habboonaanta Caloric iyo Ku Habboonaanta Beeraha
Safarka Homo-œconomicus: qaar ka mid ah tallaabooyinka dhaqaale ee masaafada
Sidee cilmi baaristaadu ugu habboon tahay xaaladda Afrika?
Maaddaama cilmi-baaristeennu ay diiradda saareyso horumarinta isbarbardhiga iyo kobaca muddada-dheer, waxay noqon kartaa mid aad ugu habboon Afrika maadaama ay baareyso qaar ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee qaaradda wajahaya. Waxaan si gaar ah u maleynayaa in dib u noqoshada doorka kala duwanaanta, isku ekaanshaha dhaqanka iyo taariikhda ee horumarinta dhaqaalaha iyo isku dhacu ay aad muhiim u tahay. Xaalad ahaan, shaqadeena ku saabsan doorka xuduudaha iyo iskahorimaadka ayaa iftiimin cusub ka bixinaya mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn qaaradda. In kasta oo isku dhaca Afrika uu ka mid yahay maaddooyinka ugu badan ee la barto lagana doodo, haddana waxaa jira dhinacyo badan oo ka mid ah oo aan la baran ama aan lagu baran keliya xaalado gaar ah. Shaqadeenu waxay muujisay dhinacyada cusub ee salka ku haya dhacdadan, oo laga yaabo inay bixiso soo jeedin siyaasadeed oo cusub oo wax looga qabanayo ilaha ugu weyn ee dhibaatada dadka.
Maxay ahayd caqabadda aad u dejisay inaad wax ka qabato markii aad shaqadan bilowdey maxaase natiijooyinka raadinta kuu horseeday natiijooyinkaaga hadda jira?
Shaqadeenii hore, aniga iyo qoraaga ila ah Emilio Depetris-Chauvin iyo aniga, waxaan soo sahaminnay twuxuu asal ahaan ka soo jeedaa kala qaybsanaanta shaqada xilliyadii hore ee warshadaha. Baadhitaankaas waxaan ku tusnay in dadka aad ugu kala duwanaa sifooyinka isir ahaanta loo kala qaado (tusaale ahaan, dookhyada, awoodaha, qiyamka, aqoonta) ay leeyihiin kala qaybsanaan shaqo oo aad u badan, taas oo u oggolaanaysa inay horumar badan sameeyaan. Natiijooyinka xiisaha leh ee aan helnay waxaa ka mid ah in qeybsanaanta shaqaaluhu ay ku habbooneyd soo bixitaanka iyo isku-darka gobollada. Maaddaama ay kala duwanaanshuhu ii egyihiin aniga oo la xiriira natiijooyinka dhaqan-dhaqaale ee xun ee xilligan casriga ah, gaar ahaan iskahorimaadka, waxaan sidoo kale sahaminnay in kala duwanaanta dadku ay xiriir la leedahay iskahorimaadka bulshada dhexdeeda ama dhan. Waxa xiisaha lihi, in aanaan raad ku yeelan karin isku dhaca qowmiyadaha dhexdooda, laakiin waxaan helnay cadeymo muujinaya in kala duwanaanta ay xiriir la leedahay isku dhacyada qowmiyadaha. Iyadoo lagu saleynayo caddayntan hordhaca ah, waxaan go'aansanay inaan sii baarinno arrinta oo aan falanqeyno bal in soohdimaha qowmiyadaha taariikhiga ahi ay ahaayeen wadayaasha iskahorimaadka xaaladda Afrika. Waxaan ku qiimeyneynaa in dabeecadda cakiran ee xuduudaha qowmiyadeed ee taariikhiga ahi ay salka ku hayso khilaafaadka casriga ah ee ku saabsan dhulka, maamulka, iyo dhulka.
Warqadeena “Xuduudaha Xuduudaha: (De facto) Soohdimaha Qoomiyadaha Taariikhiga ah iyo Colaadda Casriga ah ee Afrika”Waxaan soo bandhigeynaa cadeymo taageeraya mala-awaalkan oo cadeynaya in jiritaanka soohdimaha qowmiyadaha taariikhiga ah ay saameyn weyn ku leedahay isku dhaca Afrika. Xaqiiqdii, waxaan diiwaangelineynaa in labada geesood ee culus iyo kuwa ballaaran ee isku dhaca casriga ahi ay ku urursan yihiin meel u dhow soohdimaha qowmiyadeed ee taariikhiga ah. Waxaan ogaanay in gobollada leh xuduudihii taariikhiga ahaa ee qowmiyadeed ay leeyihiin 27 boqolkiiba dhibic ka sarreysa suurtagalnimada isku dhac iyo 7.9 boqolkiiba dhibcaha sare ee suurtagalka ah inay noqdaan goobta ugu horreysa ee iskahorimaadka Daraasaddeennu waxay soo jeedinaysaa inay jiraan xoogag gundhig muhiim u ah oo keenaya natiijadan: tartanka dhulka beeraha, cadaadiska dadweynaha, isku ekaanshaha dhaqanka iyo daciifnimada xuquuqda lahaanshaha. Marka xigta waxaan dooneynaa inaan baarno haddii ay jiraan dhinacyo kale oo hay'adeed ama dhaqan oo ay saameeyeen jiritaanka xuduudaha qowmiyadeed. Intaa waxaa sii dheer, waxaan balaarineynaa cilmi baaristeena si aan u falanqeyno saameynta dhinacyada kale ee dhaqamada kala duwan ee qowmiyadaha Afrika ee ku saabsan isku dhaca ama horumarka. Tusaale ahaan, waxaan bilaabeynaa mashruuc cusub oo aan ku baareyno rabshadaha qoyska iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka.
Waad ku mahadsantahay dooda xiisaha iyo fikirka leh. Waxaa jira dhowr arrimood oo ka dambeeya isku dhaca Afrika oo ay ka mid yihiin tartanka dhulka beeraha, cadaadiska dadweynaha, isku ekaanshaha dhaqanka iyo daciifnimada xuquuqda lahaanshaha. Dr. Ömer Özak wuxuu ka shaqeynayaa inuu soo bandhigo soo jeedin siyaasadeed oo cusub si wax looga qabto caqabadaha isku dhaca Afrika.
Ma u haysaa wax fikrado ah ama su'aalo ah Dr. Ömer Özak? Waad uga tagi kartaa iyaga sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Tifaftirayaasha: Johanssen Obanda (qoraalka) iyo Priscilla Mensah (sawir)
Ma ka shaqaysaa cilmi baaris Afrika ama Afrika? Waad adeegsankartaa AfricanArXiv, si aad ugu gudbiso shaqadaada https://info.africarxiv.org/submit/
AfrikArXiv waa kayd bulsho oo bulshada u horseedaysa isgaarsiinta cilmi baarista ee Afrika. Waxaan bixinaa madal aan faa'ido doon ahayn si aan ugu soo daabacno waraaqaha shaqada, waraaqaha diyaarinta, qoraallada la aqbali karo (waraaqaha boostada), bandhigyada, iyo barnaamijyada xogta iyada oo loo adeegsanayo aaladaha iskaashiga. AfricArXiv waxay u heellan tahay kobcinta cilmi baarista iyo iskaashiga ka dhexeeya saynisyahannada Afrikaanka, kor u qaadista aragtida wax soo saarka cilmi baarista Afrika iyo in la kordhiyo iskaashiga caalamiga ah.